အလိုအလျောက် gantry ဘောင်ဘတ်စ်ကားလျှော်စက်
မော်ဒယ်နံပါတ်. : CBK308P
CBK308P သည်စမတ်ကားတစ်စီးအ ၀ တ်လျှော်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကား၏သုံးဖက်မြင်အရွယ်အစားကိုထောက်လှမ်းထောက်လှမ်းသည်၊ မော်တော်ယာဉ်၏သုံးဖက်မြင်အရွယ်အစားကိုထောက်လှမ်း။ ယာဉ်အရွယ်အစားနှင့်အညီသန့်ရှင်းရမည်။
ရေနှင့်အမြှုပ်၏ 1.Separation ။
6. Uniform မြန်နှုန်း၊ ယူနီဖောင်းဖိအား၊ ယူနီဖောင်းအကွာအဝေး။
CBK108 အချက်အချာသန့်ရှင်းရေး၊ မြင့်မားသောဖိအားများဖလပ်နှင့်အတူကားဆေးကြောစက်သုံးမျိုးကိုလေမှုတ်ပါ။ ဤပစ္စည်းအမျိုးအစားသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးစျေးနှုန်းသက်သာသည်။ သန့်ရှင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ ကားကို 3-5 မိနစ်လျှင်မြန်စွာသန့်ရှင်းစေနိုင်သည်။